Azia Atsimo · Mey, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Mey, 2014
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Mey, 2014
India : Namono Olona 32 Ny Separatista, Mandositra Ny Miozolomana
India 10 Mey 2014
Nipoaka tao amin'ny firenena Indiana avaratra-atsinanana ao Assam ny herisetra ara-poko, ka mponina Miozolomana 32 tao an-tanàna no namoy ny ainy ary nitarika ny fiàlan'ireo miozolomana tao amin'ny faritra izany.
Pakistane Bilaogera Tsy Afa-Mamindra Saingy Manaitra Fanahy Ny Hafa Mba Hihazakazaka
Pakistana 08 Mey 2014
Tsy navelan'i Sarmad Tariq velively hanakana azy tsy hivezivezy manerana izao tontolo izao ny fahalemena nanjo azy, haka ny toeran'ny mpikabary mampihetsi-po sy atleta mpamporisika. Nodimandry teo amin'ny faha-38 taonany izy ny 30 Aprily teo tao Pakistana.
Tsy Faly Amin'ny Antoko “Bharatya Janata” Ao India Ry Zareo Bangladeshis
Bangladesh 07 Mey 2014
Niteny i Subramanian Swamy fa tokony hanome ny ampahatelon'ny taniny ho onitra ho an'i India i Bangladesh noho ireo mpifindra monina tsy manana taratasy avy any amin-dry zareo. Ho valy bontana dia tranokala 300 an'ny governamanta Indiana no nojirihan'y vondrona Bangladeshi mpijirika.
Taombaovao Tao Bangladesh Nisehoan'ny LGBT Tamin'ny Lokon'ny Avana
Hoan'ireo miozolomana maro an'isa ao Bangladesh, sokajiana ho tsy azo ekena ara-piarahamonina sy ara-pivavahana ny fahapelahana. Tsy ara-dalàna ny fahapelahana, araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena.